Phyo Thant Aung – Tagged "PTA" – ICT.com.mm
Fullmark Premium Inkjet A4 Coated Paper (50 Sheets)K6,000
Fullmark Inkjet A4 Glossy Photo Paper (20 Sheets)K5,000
Fullmark Premium Inkjet A4 Coated Paper (50 Sheets)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ A4 size coated paper 50 sheets of photo paper per pack Matte finish Bright effect Fast dry Fade resistant Vibrant color High resolution Premium quality Sharp text...
Fullmark Inkjet A4 Glossy Photo Paper (20 Sheets)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ A4 size photo paper 150 g 20 sheets of photo paper per pack High gloss finish Instant dry Fade resistant Vibrant color High resolution Premium quality Sharp...
Verbatim USB Optical Wireless Mouse (Gray)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 2.4GHz wireless technology. With 2.4GHz/8 channel wireless technology andanano receiver. The mouse is equipped with three levels of sensitivity that is adjustable in 800, 1200...
Verbatim4Port 100W PD & QC GaN USB Charger (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 66545 Warranty: 1 Year Newest ‘GaN’ technology, smaller size with higher power Equipped with2Type C PD ports and2USB-A QC 3.0 ports Type...
Verbatim3Port 65W PD 3.0 & QC 3.0 GaN Charger (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 66716 Warranty: 1 Year Newest ‘GaN’ technology, smaller size with higher power Equipped with2Type C PD port and 1 USB-A port Type C PD1 and...
Verbatim Sync & Charge Step-up USB To Lightning Cable 120cm (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 65360 Warranty: 2-year Length: 120 Certificates: FCC, CE, ROHS, Apple MFi Tough and Durable Nylon Cable CNC Cutting Easy-Fit Connector Apple MFi Certified Efficient tinned copper wires...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: 66614 Sensor type: 1/2.7″ CMOS image sensor, 2.0 Mega pixels for image Video format / resolution: MJPEG/YUY2, up to 1920×1080@30fps Manual focus from 30cm to infinity...
Fullmark Dedicated For Epson Printer Inkjet Refill 1L Ink (Cyan)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Fullmark Color: Cyan Dye based ink Non-toxic ink & Eco friendly Perfect for refilling cartridges and CISS (Continuous Ink Supply System) printers
Fullmark Dedicated For Epson Printer Inkjet Refill 1L Ink (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Fullmark Color: Black Dye based ink Non-toxic ink & Eco friendly Perfect for refilling cartridges and CISS (Continuous Ink Supply System) printers
Fullmark Premium Universal Printer Inkjet Refill 500ml Ink (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Inkjet ပရင်တာ အမျိုးမျိုးအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Fullmark အမှတ်တံဆိပ် Universal Inkjet Refill 500ml မင်ဘူး (Cyan) ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးဆေးအခြေခံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ မင်ရည်ဖြစ်ပြီး အဆိပ်သင့်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ မပါဝင်ပါဘူး။ CISS ပရင်တာတွေနဲ့ ကတ်ထရစ်တွေကို ပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ မင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Brand: Fullmark, Model:...
Verbatim Seaglass USB 3.2 Flash Drive 64GB (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Data is justaclick away with the Verbatim Store 'n' Go Sea Glass USB Drive. It gives you the ability to capture all your data in...
Verbatim Seaglass USB 3.2 Flash Drive 32GB (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Verbatim Sync & Charge USB3.2 C to C Cable Model: 66546 Newest ‘GaN’ technology, smaller size with higher power Equipped with2Type C PD...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 41646 Wide frequency stereo headset 40mm Drivers Great bass reproduction Comfortable ergonomic fit even after extended use Adjustable, built-in, omni-directional microphone Adjustable in-line volume control Designed...
Verbatim Classic Over-Ear Stereo Headphone (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 65068 Over-the-head adjustable design 40mm drivers deliver rich, over-ear acoustic sound In-line microphone for answering phone calls whilst on-the-go Modern stylish design 1.2m cable allows freedom...